ဇွန်လ သို့မဟုတ် LGBT Pride Month သို့မဟုတ် လူသားသိက္ခာတို့ ပြန်လည်ရရှိခြင်း | Colors Rainbow
June 1, 2016 May 8, 2018 admin 752 Views0Comments pride month	min read
ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီဟာ ကိုယ်တွေဆီကနေ မကြာခင်မှာ ထွက်ခွာသွားတော့မယ်ဆိုတာ အရိပ်အယောင်တွေ တွေ့နေရပါပြီ။ မကြာခင်မှာ မိုးရာသီကို ရောက်ရှိလာပါတော့မယ်။ မိုးရာသီရဲ့ လေအေးအေးလေးတွေကို ရှုရှိုက်ရင်း မိုးစက်လေးတွေရဲ့ တို့ထိမှုကို ခံစားရတော့မယ်ဆိုတာ တွေးလိုက်တိုင်း ကြည်နူးစရာပါပဲ။
ဇွန်လဟာ မိုးရာသီရဲ့ အစ… ဥတုရာသီရဲ့ အကူးအပြောင်း….။
ဒီ ဇွန်လဟာ တို့တတွေအားလုံး… ဘဝတွေ… လူသားဂုဏ်သိက္ခာတွေ သူ့နေရာနဲ့ သူ ပြန်လည်ရရှိဖို့ အကူးအပြောင်းတစ်ခု စတင်ခဲ့တဲ့ လတစ်လပေါ့…။
ဟုတ်တယ်… ဒီလမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့က မင်ဟက်တန်မှာရှိတဲ့ စတုန်းဝေါ အင်းကနေ LGBT တွေဟာ မတရားတဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေကို သွေးတွေ၊ နာကျင်မှုတွေ၊ မျက်ရည်တွေနဲ့ လက်ချင်းချိတ် အံတုခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ ၁၉၆၉ ခုနှစ်ပေါ့။
ဒီအံတုမှုဟာ တို့တတွေရဲ့ သမိုင်းတစ်ခေတ်မှာ စတုန်းဝေါ အရေးအခင်းလို့ ခေါ်စမုတ်ပြုခဲ့ရပြီး တို့တတွေ အားလုံးဆီကနေ မတရားလုယူခြင်း ခံနေရတဲ့ လူသားဂုဏ်သိက္ခာတွေ ပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့ အလှည့်အပြောင်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကမ္ဘာကြီးကို နယ်နိမိတ်တွေ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် တို့တတွေ အားလုံးအပေါ် ဖိနှိပ်မှုတွေကတော့ နိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေ၊ ဘာသာတရား အရောင်တွေက ဆီးတားမထားပါဘူး။ တို့တတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်လို ဒေသအသီးသီး၊ နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ဖြန့်ကျက်တည်ရှိနေပါစေ၊ ဘယ်လို ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေ ရှိပါစေ၊ တူညီတာတစ်ခုကတော့ တို့တတွေအပေါ် ခွဲခြားမှု၊ ဖိနှိပ်မှုတွေကတော့ အတူတူပါပဲ။ တို့တတွေအားလုံး လူသားသိက္ခာတွေ လုယူခြင်းခံရတာတွေကတော့ အတူတူပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဒီစတုန်းဝေါ အရေးအခင်းဟာ ကမ္ဘာ့အရပ်ရပ်မှာ တည်ရှိနေကြတဲ့ တို့တတွေအားလုံးရဲ့ တိုက်ပွဲခေါ်သံတစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့တယ်… မိန်းမောနေတဲ့ တို့တတွေရဲ့စိတ်တွေကို လှုပ်နှိုးစေနိုင်ခဲ့တယ်… တို့တတွေရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ လူသားသိက္ခာကို တို့တတွေက လုပ်ဆောင်မယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ ပြတ်သားတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ခံယူချက်တွေ ဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်တွေထဲက တစ်ယောက် ကမ္ဘာတခြားဖက်မှာ ဖိနှိပ်ခံရရင်လည်း ဒါဟာ ကိုယ်တွေပဲ မဟုတ်ပါလား။ ကိုယ်တွေမှ မညီညွတ်ရင် ဘယ်သူနဲ့ ညီညွတ်ရမလဲ။
ဒါကြောင့် ဒီဇွန်လကို တို့တတွေ ဂုဏ်ပြုကြရတာပေါ့… စတုန်းဝေါ အရေးအခင်းကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အမေရိကန်မှာတော့ ဒီလကို Pride Month လို့ သတ်မှတ်ဂုဏ်ပြုထားလေရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီလကို အမေရိကန်နိုင်ငံ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပဲ တခြားနိုင်ငံတွေ၊ ဒေသအသီးသီးမှာလည်း ဂုဏ်ပြုအသိအမှတ်ပြုလာကြပါပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်တွေထဲက တစ်ယောက် ကမ္ဘာတခြားဖက်မှာ ဖိနှိပ်ခံရရင်လည်း ဒါဟာ ကိုယ်တွေပဲ မဟုတ်ပါလား။ ကိုယ်တွေမှ မညီညွတ်ရင် ဘယ်သူနဲ့ ညီညွတ်ရမလဲ။
မနှစ်ကဆိုရင်လည်း ရန်ကုန်က အမေရိကန်သံရုံးမှာ တို့တတွေရဲ့ ရိမ်းဘိုးအလံကို လွှင့်ထူပြီး ဒီလကို ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ ကမ္ဘာ့တခြားနေရာတွေမှာလည်း အလားတူပဲ ဒီလကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ရိမ်းဘိုးအလံတွေကို လွှင့်ထူရင်း တို့တတွေရဲ့ လူသားသိက္ခာနဲ့အညီ ရပိုင်ခွင့်တွေကို အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလဟာ တို့တွေရဲ့ သမိုင်းတစ်ခေတ်ပြောင်းစေခဲ့တဲ့ လ… လူသားသိက္ခာတွေ ပြန်ရဖို့ အလှည့်အပြောင်း ဖြစ်စေခဲ့တဲ့လ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဇွန်လကို Pride Month အဖြစ် ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုလိုက်ကြရအောင်နော်….
Happy Pride Month……..!!!!!!!!
← လူသားထဲက လူသားများသာဖြစ်သော LGBT တို့သည် လူသားများအားလုံးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာရေးသုခကို ရရှိခံစားခွင့်ရှိသည်
ဇွန်လကို LGBT တွေအတွက် ပျော်ရွှင်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ လဖြစ်စေဖို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံး ဆုတောင်းဆန္ဒပြု →